Ethnic Nationalities Voice တိုင်းရင်းသားအသံ: Today Slogan
Novemebr 12, 2010
Briefing Notes, 12 November 2010
This isasummary of what was said by UNHCR spokesperson Adrian Edwards – to whom quoted text may be attributed – at the press briefing, on 12 November 2010, at the Palais des Nations in Geneva.
အရှေ.တောင်အာရှသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အကြောင်းအထောက်အထားဗွီဒီယိုရိုက်ကူးနေသည့်အချိန်တွင်း Long stay visa ရရှိထားသော်လည်းဗမာစစ်အစိုးရကအမြင်မတော်၍နှင်းထုတ်လိုက်ကြောင်းသိရှိရပါသည်၊
Australian film crew deported from Burma
Australian authorities have raised concerns with Burma about the deportation of two Australian journalists from the country.
&amp;amp;amp;amp;amp;lt;iframe id="dcAd-1-4" src="http://ad-apac.doubleclick.net/adi/onl.smh.news/news/breakingnewsnational;cat=breakingnewsnational;cat1=national;ctype=article;pos=3;sz=300x250;tile=4;ord=7.3312087E7?" width='300' height='250' scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" allowtransparency="true" frameborder="0"&amp;amp;amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;amp;amp;lt;/iframe&amp;amp;amp;amp;amp;gt;
A Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) spokesman said consular officials in Rangoon met the pair before they left and confirmed their well-being.
But the department says it holds concerns about the pair's deportation.
"We have raised the matter atasenior level in Rangoon, stressing that, in keeping with the provisions of the Vienna Conventions, we expect the Burmese authorities to advise the Australian Embassy immediately if an Australian citizen is detained by them," the spokesman said.
SSA တပ်မဟာ ၁ ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်း နအဖတပ် တိုးဖြည့်ဖြန့်ကျက်
Thursday, 11 November 2010 20:16	မွေခေါဝ်
ပြည်သူ့စစ်အသွင်ပြောင်းရန်ငြင်းဆန်သော အပစ်ရပ် သျှမ်းပြည်တပ်မတော် မြောက်ပိုင်း တပ်မဟာ(၁ ထိန်းချုပ်နယ် မြေသို့ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ တပ်အင်အားတိုးချဲ့ဖြည့်တင်းထားသောနအဖတပ်များ ဆုတ်ခွါခြင်းမရှိသေးဘဲ ဖြန့်ကျက်နေရာ ယူထား ကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရပါသည်။
“အင်အား ၁၈၀၀ လောက်ရှိတယ်။ တပ်မဟာ ၁ ဌါနချုပ်ရဲ့အရှေ့တောင်ဘက်၊ တောင်ဘက်နဲ့ အနောက်ဘက်တွေမှာ နေရာယူထားတယ် ” ဟု မိုင်းရှုးဒေသခံတစ်ဦးက ပြောပါသည်။
သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း နမ့်ဇန်-ကျိုင်းတောင်းအခြေစိုက် ခမရ ၅၆၉ ၊ ၅၇၄ တို့ကရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီလုံခြုံရေး အကြောင်းပြ ကာ မိုင်းရှုးနှင့်မိုင်းနန်းဘက်သို့ သွားရောက်ဖြည့်တင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“နမ့်လောင်းအုပ်စုကနေ သံလွင်မြစ် တာ့ပိန်းဖိဆိပ်အဆင်း ကားလမ်း၊ တိဟုန်းအုပ်စုက တာ့ဝန်းနောင်းကူးတို့ဆိပ်အသွား ကားလမ်း၊ တိဟုန်းအုပ်စုကနေ မိုင်းရှုးအသွားကားလမ်း၊တောင်ဟျိုးအုပ်စုအနားတ၀ိုက်နဲ့ တိဟုန်း အသွား လူသွားလမ်း လှည်းလမ်းတွေမှာ နအဖတပ်ချပိတ်ဆို့စစ်ဆေးနေတယ်။ နေရာအချို့ဖြန့်ကျက်စောင့်ဆိုင်းတယ်” ဟု ၎င်းကဆက်ပြောပါ သည်။
နိုဝင်ဘာ ၅ ရက်ကလဲ တိုင်းချုပ် ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်သန်းထွဋ်နှင့်အတူ ကျောက်မဲအခြေစိုက် စကခ ၁ နှင့် တပ်မ ၅၅ လက်အောက်ခံ တပ်ရင်းခမရ ၅၀၅ (နမ့်လန်) နှင့်ခမရ ၁၁၄ (နောင်ချို) တို့ကလည်း လားရှိုးမှတန့်ယန်းမိုင်းကောင်သို့ ရောက်သွားကြပြီး ယနေ့တိုင်တပ်ရုပ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးကြောင်း ကျောက်မဲဒေသခံတစ်ဦးက အခုလိုပြောပါသည်။
“တိုင်းချုပ်အောင်သန်းထွဋ်နဲ့အတူ တပ်ရင်းမှူးတွေ မိုင်းကောင်ဘက်သို့ရောက်သွားကြတာ။ အခုထက်ထိဘဲ။ ရှေ့တန်းရင်းမှူး တွေတပ်မဟာ ၁ ထိန်းချုပ်နယ်မြေထဲ ကျေးရွာအုပ်စု ၃-၄ စုရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌတွေကိုသွားခေါ်တွေ့တယ်။ ထင်းတွေဝါးတွေဆင့်ဆို တယ် ကြာကြာနေမယ့်ပုံဘဲ”
ယမန်နေ့ ရိက္ခာအပြည့်တင်ဆယ်ဘီးကားတစီးမိုင်းကောင် ခလရ ၃၃ ထဲရောက်သွားကြောင်း နယ်လှည့်ပြည်သူ့ ဆက်ဆံရေး တပ်ဖျော်ဖြေရေးအဖွဲ့ကား ၄ စီးလည်းရောက်သွားကြောင်း၊မိုင်းကောင်ဘောလုံးကွင်း၌ ယမန်ညက အဆိုအက ဖျော်ဖြေပွဲလုပ် ကြောင်း မိုင်းကောင်ဒေသခံတစ်ဦးက ပြောပါသည်။
မိုင်းကောင်မြို့နယ်ခွဲ တောင်ဘက် ၇ မိုင်အကွာ တောင်ဟျိုးနှင့်နမ့်လောင်းကျေးရွာအုပ်စုအကြား လွယ်ဇောင့်တောင်ထိပ်ရှိ တပ်မဟာ ၁ တပ်စခန်းမှာမူတပ်ရုပ် ဆုတ်ခွါခြင်းမရှိသေးကြောင်း သိရှိရသည်။
Thursday, 11 November 2010 19:09	S.H.A.N.
နယ်စပ်တိုက်ပွဲသတင်းနဲ.ပတ်သက်၍ထိုင်းအစိုးရကအေးအေးဆေးဆေးဖြစ်သွားပြီဆိုသည့်သတင်းကိုဦးစားပေးရေးသားကြပါသည်၊အကြောင်းက တော့နယ်စပ်စီးပွားရေးများမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြည်လည်လည်ပတ်စေသည့်ဆန္ဒရှိသည်၊ဗမာစစ်အစိုးရဘက်ကတော့စစ်ပြေးလူထုပြန်လာရင်ကာဗာအကာအကွယ်လုပ် ဖို.ရည်ရွယ်ပုံရသည်၊အကြားမှာစစ်ပြေးသူများကညှပ်နေကြပြီးပြေးလိုက်ပြန်လိုက်ဖြစ်နေကြပါသည်၊ဗမာစစ်အစိုးရဘက်ကနေငြိမ်းသက်သွားပြီးလို.ထိုင်း အစိုးရဘက်ကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပြီးထိုင်းအစိုးရကလည်းလက်မနှေးဘဲပြန်သွားရပြီးလို.ဆိုပြီးစစ်ပြေးသူများကိုကားပေါ်အကြပ်တက်ခိုင်းပြီးပြန်ပို. လိုက်သည်၊ဟိုဘက်လည်းရောက်ရော၊သေနတ်သံတွေပြန်ကြားတော့ ဒီဘက်ကိုပြန်လှည့်လာရသည်၊ဒီလိုနဲ.ဘဲရွာလည်နေကြသည်၊ဗမာစစ်အစိုးရ ကိုအကယ်၍တိုင်းရင်းသားတပ်ပေါင်းစုသဘောနဲ.တိုက်ပွဲဖြစ်ရင်ထိုင်းအစိုးရဘက်ကတစ်မျိုးတစ်ဖုံသဘောထားပြီးကူညီမယ်လို.လည်းသတင်းထွက်နေပါ သည်၊အဲဒီလိုဖြစ်လာရင်နယ်စပ်ဒေသကိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များကထိန်းချုပ်နိုင်သည့်သဘောလို.ထိုင်းအစိုးရကယူဆထားသည်ဟုသိရှိရပါ သည်၊ဒါဆိုရင်၊ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ.စစ်ပွဲနိုင်သည့်ဘက်ကိုရပ်တည်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်နိုင်သည့်ပေါ်လစီကိုသာဦးစားပေးထည့်တွက်ထားကြောင်းပါ။
ကရင်နီပြည်တွင် ၂၀၁၀ ခုနှစ်အတွင်း ပုံမှန်လုပ်ရှားနေသည့် ဒကစ လက်အောက်ခံတပ်ရင်း ၁၄ ရင်းရှိပြီး ၎င်းတို့မှာ ကလရ ၅၄၊ ၇၂၊ ၅၃၁၊ ၄၂၈၊ ၄၂၉၊ ၄၃၀၊ ၁၃၄၊ ၁၃၅၊၂၅၀၊၂၆၁၊ ၁၀၂၊ ၅၃၀၊ နှင့် ခမရ ၃၃၇၊ ၄၂၇ တို့ ဖြစ်သည
November 10 ThanShwe Order Attack on KNU Areas - Attck Into DKBA Area
Border townships not fully secure yet
The situation on the Thai-Burmese border was still uncertain yesterday, because the Burmese military has not completely secured the towns yet.
Myawaddy was relatively calm after fighters from the Democratic Karen Buddhist Army (DKBA) retreated and Burmese troops regained control. The last group of refugees fleeing the clashes since Monday has been repatriated,adistrict official said.
Fighting between the guerrillas and Burmese troops reportedly continued early yesterday in the area opposite Takâ€™s Phop Phra district, causing an influx ofafew thousand refugees.
However, some 2,000 refugees left for home yesterday afternoon after they were told the situation was normal, district chief Poj Ruwo-ranond said.
There were reports ofasmall clash in the border area near Phop Phra late Tuesday with no casualties, he said.
Tak Governor Samart Loyfa voiced concern about the situation in Phop Phra district because it is situated oppositeaDKBA stronghold and the Burmese military might launchamajor offensive on the Karen minority soon. Ifanew round of fighting erupts, the situation in the border area near Phop Phra district might be more serious than it was in Mae Sot, he said.
Meanwhile, the situation in Pyaduangsu opposite Kanchana-buriâ€™s Three Pagodas Pass was said to have eased though the 3,000 or so Burmese refugees refused to return because they were not sure about the situation, Sangkhla Buri district chief Chamras Kangnoi said.
The last sound of firing was heard in the early hours of yesterday, and it appeared there was no fighting during daytime, he said.
â€œThe two sides are havingaconfrontation, but as far as we know, they are trying to negotiateaceasefire,â€� Chamras said.
However, reports from border sources say otherwise. Some 300 armed Karen fighters yesterday retreated 5-6 kilometres farther into the district of Ban Mai on the Burmese side, they said. A few hundred Mon fighters moved to join the DKBA, the sources said, noting there were no signs of negotiations.
â€œIt seems like the minorities are preparing to openanew round of attacks against the government base in Pyaduangsu,â€�asecurity official said.
Meanwhile some 300 Burmese troops were sent to secure Pya-duangsu town in preparation, he said.
A major problem in Sangkhla Buri is that local authorities are running out of funds to provide assistance to refugees, the district chief said.
â€œWe need some Bt500,000 day to provide them with food, and the Bt1 million we were given is only good for two days,â€� Chamras said.
Commander of the 9th Infantry Division Maj-General Tawan Ruangsri said Thailand would only provide humanitarian assistance to refugees, adding that no armed groups would be allowed to use Thai territory asabase to fight against Burma.
NEW YORK — Six Myanmar ethnic rebel groups have formedacoalition to step up hostilities with the country's junta,arepresentative for an activist group said.
Three of the groups had previously signed ceasefire accords with the junta, which faces renewed international criticism over the country's November7national election.
The alliance accord was made three days before the election atameeting in Thailand, Gum Sang Nsang,arepresentative of the Kachin National Organization said followingameeting at the UN headquarters late Tuesday.
The Kachin National Organization is allied to the Kachin Independence Army (KIA), one of the signatories.
He said the others were the Karenni National Progressive Party (KNPP), the Karen National Union (KNU), the Mon New State Party (MNSP) and the Shan State Army-North (SSA-N). Together they could muster at least 30,000 fighters, he said.
The Kachin group, the MNSP and the Shan State Army had all signed ceasefires with the junta but had become disillusioned and rejected the outcome of the vote, said Gum Sang Nsang.
He warned that hostilities would increasingly be moved to urban areas. "The war will no longer be restricted to the jungle."
Gum Sang Nsang said the junta and ethnic rebel groups had both reinforced their troop numbers in disputed areas since the election.
The Myanmar government has battled ethnic rebels since the former Burma gained independence in 1948.
In border areas where civil war continues, rights groups have accused the junta of wagingabrutal counter-insurgency campaign involving the rape, torture and murder of villagers whose homes are routinely destroyed.
KNU Statement Condemning Election-Related Violence in Burma’s Border Areas eng.
ကယန်းပြည်သစ်ပါတီ အခြေစိုက်ရာဒေသမှာ နအဖ တပ်အင်အားတိုးချဲ့
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဖယ်ခုံမြို့နယ်ရှိ နယ်ခြားစောင့်တပ်နှင့် ပြည်သူ့အသွင်ပြောင်းလဲရန် ငြင်းဆန်နေသည့် ကယန်းပြည် သစ်ပါတီ(KNLP) အခြေချနေထိုင်သည့်နေရာကို ယခုရက်ပိုင်းများအတွင်း နအဖ ဒေသကွပ်ကဲရေးစစ်ဌာနချုပ်(ဒကစ) လက် အောက်ခံ တပ်ရင်း ၄ရင်း လာရောက်အင်အားတိုးချဲ့နေသည်ဟု စုံစမ်းသိရှိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာလ ၁၉ရက်နေ့မှစ၍ အဆိုပါဒေသကို နအဖ ဒကစ လက်အောက်ခံရင်း ၄ရင်းဖြစ်သည့် ခမရ(၃၃၇)၊ ခမရ(၈၅)၊ ခမရ(၂၂၃)နှင့် ခလရ(၄၂၁)တို့ (KNLP)နယ်မြေအတွင်း နအဖ တပ်အင်အား လာရောက်ချထားကြောင်း ကယန်းမျိုး ဆက်သစ် လူငယ်များအဖွဲ့(KNGY)၏ သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ခွန်းရော်ဘင်ဆန်က ကေအိုင်စီကို ယခုလိုပြောသည်။
သူက “ကယန်းပြည်သစ်ပါတီက နယ်ခြားစောင့်တပ်ပြောင်းဖို့၊ ပြည်သူ့စစ်အသွင်ပြောင်းဖို့ လုံးဝ လက်မခံဘူးလေ။ အဲဒါကြောင့် နအဖက အခုလို လာပြီး စစ်အင်အားနဲ့ လာခြိမ်းခြောက်တာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။”ဟု ပြောဆိုသည်။
သို့သော် အဆိုပါ နအဖ တပ်ရင်းများသည် ဖယ်ခုံနယ်မြို့နယ်၊ ကယန်းဒေသအတွင်း လာရောက်လှုပ်ရှားသော်လည်း လူ့အခွင့် အရေး ချိုးဖောက်မှုများ တစုံတရာ ပြုလုပ်ခြင်းမရှိကြောင်း ဖယ်ခုံဒေသခံ ပြည်သူများက ပြောဆိုနေကြသည်။
ကယန်းပြည်သစ် အခြေစိုက်ရာဒေသတွင် ယခုလို တိုးချဲ့ရောက်ရှိလာသည့် အင်အား ၂၀၀ ၀န်းကျင်ရှိ နအဖ တပ်ရင်း ၄ရင်း နှင့် နယ်မြေခံ ခမရ(၃၃၆)တပ်ရင်းများသည် ဖယ်ခုံမြို့နယ်ရှိ ဆီးဘူး၊ ပြင်ဆောင်၊ ကျောက်ဆောင်ဖူးလော၊ ကန်ဆန်း၊ တောင် တန်း၊ ရေကန်ဖူးလော၊ သိုတန်၊ မိုးဗြဲ၊ ပီကင်း၊ နန်းကဲ၊ ၀ါဆောင်၊ လန်းဂေါ၊ ဘိုဘျာ၊ တောင်မြင့်၊ စီလီသလန်၊ ဇီးဖြူတောင်၊ ရွာ တန်းရှည်၊ လုံးကဲ၊ လှိုင်းလီ၊ ရွာကြီး၊ ကန်လှနှင့် သပြေကုန်း ကျေးရွာများတွင် လှုပ်ရှားနေသည်ဟု သိရသည်။
စစ်အစိုးရကို တော်လှန်ရန် ကယန်းပြည်သစ်ပါတီကို ၁၉၆၄ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ၁၉၉၄ခုနှစ်၌ စစ်အစိုးရနှင့် ပစ်ခတ်ရပ် စဲရေးကို သဘောတူလက်မှတ်ထိုးခဲ့သည်။ လက်ရှိ အင်အား ၂,၀၀၀ ၀န်းကျင်ရှိ ကယန်းပြည်သစ်ပါတီသည် ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၀၉ ခုနှစ် အစောပိုင်းတွင် စစ်အစိုးရက နယ်ခြားစောင့်တပ် သို့မဟုတ် ပြည်သူ့စစ်အသွင်ပြောင်းရန် ဖိအားပေးခဲ့သည်။
KNLP သည် ၎င်းတို့၏ ဌာနချုပ်ကို ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဖယ်ခုံမြို့နယ် ဆီဘူးတွင် ထားရှိသည်။
ThanShwe Orders MajGen Kyaw Kyaw Tun Arrested and Sent Back to NPT Artillary Ready on Phayagone
DAB Statement on Current Attack 9-11-10
အကယ်၍ငြိမ်းသက်မှုအခြေအနေရှိလာမယ်ဆိုရင်စစ်ဘေးထွက်ပြေးသူများကိုပြန်ပို.နိုင် အောင်စီစဉ်မယ်လို.ထိုင်းအရာရှိတွေပြေကြားသည်၊ဗမာစစ်တပ်ဘက်ကအနဲဆုံး ၂၅ ဦးထက်မနဲသေဆုံးပြီးအများအပြားဒဏ်ရာရတယ်လို.သိရှိရပါသည်၊
ဘုရားသုံးဆူဘက်မှာမနေ.ညကသေနတ်သံညိမ်သက်နေပေမဲ့ဒီနေ.မနက်ပိုင်းမှာပြန်လည်ပစ်ခတ်နေကြပြီးထိုင်းဘက်ကိုအနည်းဆုံးလက်နက်ကြီး သုံးလုံးကျရောက်တယ်လို.သိရှိရပါသည်၊ဗမာစစ်တပ်ဘက်ကတော့ထိုးစစ်ချက်ချင်းလုပ်တာထက်လှည့်ဖြားနည်းလမ်းတစ်ခုခုရှာနေပုံရတယ်လို. မွန်ပြည်သစ်ပါတီမှအနီးကပ်နယ်စပ်မှာစစ်ရေးလေ့လာနေသူတစ်ဦးကပြောပြပါတယ်။လျှပ်စစ်စွမ်းအင်းဌာနမီးရှို.ဖျက်စီးခံလိုက်ရသည့်အတွက်
ဒါကြောင့်။ဗမာစစ်တပ်ဘက်မှအင်းအား ၁၅၀ လောက်ရှိသည့်ချေလျှင်တပ်ရင်းအမှတ် (၂၈၃)နှင့်ခြေလျှင်တပ်ရင်းအမှတ် (၄၀၅)တို.ကဘုရားသုံး ဆူမြို.ကိုမကာကွယ်နိုင်ဘဲလက်လွှတ်လိုက်ရသည့်နောက်ပိုင်းအချက်အချာကျသည့်ရုံးများအားလုံးနီးပါးကိုဒီကေဘီအေတပ်တွေကဖျက်စီးမီးရှို.
ညနေပိုင်း ၁၀ နာရီလောက်
ဘုရားသုံးဆူနယ်စပ်တိုက်ပွဲကြောင့်ထွက်ပြေးလာသည့်ဒုက္ခသည်များဘုရားကုန်မှာလူ(၄၀၀၀)ကျော်ပိတ်မိနေ၊ဒီကေဘီအေတပ်တွေထိန်းချုပ်ထား ဆဲ၊ကေအန်ယူကတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေနေရာယူထားပြီးဗမာတပ်ကအခြေချစခန်းမှာပဲရှိနေ၊ဒီကေဘီအေကလက်နက်ကြီးနှင့်လှမ်းပစ်ပေးနေ၊ဗမာ စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းကအနိုင်ကွင်းကနေချီတက်လာနေပြီးဒီညတိုက်ပွဲပြင်းထန်ဖွယ်အလာအလာရှိ၊မြို.ထဲမှာလူမရှိသလောက်ခြောက် ကပ်နေဆဲ၊
ပြည်တွင်းရှိလူထုတွေကလည်းဖက်ဒရယ်ပါလီမာန်ဖွဲ.စည်းခြင်းအပေါ်ထောက်ခံပွဲလုပ်၊မွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်ရှိမုဒုံ၊ကျိုက်မရောနှင့်ကြားအင်ဆိ ပ်ကြီးမြို.များလူထုများတက်ရောက်ထောက်ခံ၊ (ပလောင်အမျိုးသားဝက်ဘလော့မှရယူသည်)
Support of Federal Parliament in Inside Burma
Wall Street Journal ကဒီလိုရေးတယ်
BANGKOK—Sporadic clashes between ethnic Karen rebels and Myanmar government troops roiled an important border town Mondayaday after the country's first elections in two decades, raising fears of further ethnic violence as Myanmar's armed forces attempt to cement their hold over the country's fractious border regions.
The conflict began Sunday in Myawaddy town near Myanmar's eastern border with Thailand during an election that appears set to deliverapro-military parliament and which U.S. President Barack Obama and other global leaders have criticized as being neither free nor fair.
Vote counting, meanwhile, continued around the country Monday, although progress remained slow and smaller opposition parties complained of irregularities in the election. State media Monday reported election commission officials as saying that 40 government-backed candidates had won their races, including six recently retired generals.
Gunfire and mortars could be heard in the area from the Thai side of the border across the Moei River and blasts and shooting continued throughout Monday. On the Thai side, Mae Sot district chief Kittisak Tomornsak said fires had been set on the Myanmar side of the river. He estimated that more than 10,000 people had already waded, swam or taken small boats across the strip of water separating the two countries.
Thai police and government officials took many of the fleeing people toaThai army camp where they tried to supply the people with tarpaulins, food, water and sanitation facilities, but Mr. Kittisak said the local government fears it will be swamped by refugees. "We expect many more to come," Mr. Kittisak said. "It's not clear what's happening on the other side of the border."
The ethnic clashes began on Sunday whenafaction from the Democratic Karen Buddhist Army took over Myawaddy's police station and post office. The group is generally supportive of Myanmar's military regime, but some members of ethnic-Karen-based force are pressing for greater autonomy from the ethnic-Burman dominated armed forces.
Khin Ohmar,aspokeswoman for the Burma Partnership,apro-democracy advocacy group active in the area, said the rebel faction seized key installations in Myawaddy Sunday and that fighting resumed with government forces on Monday. Government forces later retreated from the town and began shelling the area as they apparently awaited reinforcements. It's unclear how many casualties there have been.
"The residents say they were told to leave the town and that's why there so many of them coming into Thailand now," Ms. Khin Ohmar said.
A Thai army commander, Col. Wannatip Wongwai, told the Associated Press that Thai authorities would start sending the refugees back across the border once the situation in Myanmar "is under control".
Nearly 40% of Myanmar's 50 million people come from ethnic groups other than the dominant Burmans, who comprise the bulk of the powerful military. The country, also known as Burma, has been riven byaseries of guerrilla wars since securing independence from Britain in 1948 but ethnic tensions in the area date back centuries.
Ethnic Karens previously sought their own state, but many in recent years have instead sought outagreater degree of autonomy, as have other ethnic-minority groups such as the Kachin, Wa and Shan. Sunday's election, though, appear to limit the prospect of any autonomous rule for Myanmar's ethnic-minorities, who mostly cluster along the country's long borders. In recent months, tensions have flared as the government stepped up its military presence in border areas and instructed former rebel armies to fold themselves into an integrated border protection force under the direct control of Myanmar's military regime.
Analysts say the faction involved in the Myawaddy clashes resents being absorbed into the government's Border Guard Force and appears to be resisting, as other factions in Kachin and Wa-dominated areas near the Chinese border previously have done.
Thailand and China previously have urged Myanmar not to do anything that could trigger an exodus of refugees from Myanmar. China in particular is anxious for Myanmar to tamp down any volatility in the north of the country where Beijing is building pipelines to pump oil and gas to its big industrial centers.
Myanmar's military regime aims to create new regional assemblies where minority groups can retain their sense of identity. But analysts say ethnic-Karen rebels, among others, are skeptical that they will be allowed to exert any influence over the areas which they previously attempted to rule by themselves.
Myanmar's military leaders say Sunday's vote—the first since 1990—will put the country on the path to democracy. Critics allege the ballot is an attempt to sanitizearegime best known for detaining Nobel Peace Prize laureate Aung San Suu Kyi, whose National League for Democracy won the 1990 vote, under house arrest for 15 of the past 21 years.
The junta-backed Union Solidarity and Development Party appears set to secure the largest share of the seats despite decades of economic mismanagement and harsh repression. It put forward candidates for nearly all the 1,159 seats in the two-house national parliament and 14 regional legislatures. Another pro-military party, the National Unity Party contested around 995 seats.
The largest antigovernment party, in contrast, put forward just 164 candidates and the constitution guarantees 25% of parliamentary seats for military appointees. Ms. Suu Kyi was barred from participating and urgedaboycott of the vote.
(၆)နာရီအတွင်းမြဝတီမြို.ကနေထွက်ခွာဖို.ဗမာစစ်အစိုးရတပ်ခြိမ်းခြောက်နေပြီ၊ ဒီကေဘီအေမဆုတ်ခွာပါကမြဝတီတစ်မြီု.မီးရှို. ပစ်မယ်ဟုခြိမ်းခြောက်နေသည်ဟုထိုင်း AS TV ကထုတ်လွှင့်နေသည်၊သို.သော်၊စစ်အစိုးရခြိမ်းခြောက်ထားသည့်အတိုင်လုပ်ဆောင်ဖို.ဖြစ်နိုင်သည့်အလာအလာနဲပါးကြောင်းဟုဆို သည်၊သွေးတို.စမ်းသည့်သဘောဟုသုံးသပ်သည်၊ဗမာစစ်အစိုးရအနေနဲ.မြဝတီမြို.မီးရှိူ.ပါကပြည်တွင်းရှိတပ်ရင်းများလည်းမီးလောင်
ထို.အပြင်၊မွန်တပ်၊ကေအန်ယူနှင့်ဒီကေဘီအေအင်းအား တစ်ထောင်လောက်ဘုရားသုံးဆူမြို.ကိုထိန်းချုပ်ထားသည်ဟုလည်းထုတ်လွှင့်နေသည်။ဒီညတိုက်ပွဲပိုပြင်းထန်လာမည်ဟုလည်း ဝေဖန်သုံးသပ်သွားပါသည်။
တိုက်ပွဲအကြောင်းနောက်ဆုံးအခြေအနေကိုပြောပြနေသည့်ထိုင်းတီဗွီChannel7(ဟံသာဝတီဝက်ဆိုက်မှရယူသည်)
ဒီကေဘီအေနှင့် ကေအဲန်ယူ ပူးပေါင်းတပ် ဘုရားသုံးဆူမြို့ကို စတင်သိမ်းပြီ
နိုဝင်ဘာလ ၈ရက်။ ကေအိုင်စီ
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ဘုရားသုံးဆူမြို့တွင် ယနေ့မနက် ၁၁နာရီကျော်အချိန် နအဖနှင့် ဒီကေဘီ၊ ကေအဲန်ယူ ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ ကြား တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် မွန်းလွဲ ၂နာရီကျော်အချိန်တွင် အဆိုပါ ပူးပေါင်းတပ်တို့က ဘုရားသုံးဆူမြို့ကို စတင် ၀င်သိမ်း ပြီဟု သိရသည်။
ကေအဲန်ယူ တပ်မဟာ(၆)ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်ကြီးစောထဲနေက “ဒီမနက် ၁၁း၁၅မိနစ်အချိန်မှာ ဗိုလ်နော်တယာ ဦးဆောင် တဲ့ ဒီကေဘီအေ တပ်ရင်း(၉၀၇)နဲ့ ကျနော်တို့လူတွေ ပူးပေါင်းပြီးတော့ နအဖ ခလရ(၂၈၃)နှင့် ခမရ(၄၀၅)တပ်ရင်းတို့ကြား ဘုရားသုံးဆူနှင့် မဲ့ကသာသွားရာလမ်း ရပ်ကွက်(၄) နအဖ တပ်စခန်းမှာ တိုက်ပွဲ စတင်ဖြစ်ပွားတယ်။ လောလောဆယ်တော့ နအဖတပ်တွေ တပ်ကုန်းကို အကုန်နေရာရွှေ့လိုက်ပြီ။”ဟု ပြောသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် ဘုရားသုံးဆူမြို့တ၀က်ခန့်ကို ၀င်ရောက်သိမ်းဆည်းနိုင်ပြီဖြစ်သလို နအဖ ကြေးနန်းဆက်သွယ်ရေးရုံး၊ စိုက် ပျိုးရေးရုံးကို ဒီကေဘီအေနှင့် ကေအဲန်ယူ ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ ၀င်ရောက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း စောထဲနေက ပြော သည်။
ကေအဲန်ယူ၏ ပြောပြချက်အရ လက်ရှိအချိန်တွင် ဘုရားသုံးဆူ၌ ဒီကေဘီအေ၊ ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (ကေအဲန်အယ်လ်အေ)၊ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ(အဲန်အမ်အစ်စ်ပီ)နှင့် ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီတို့(၄)ဖွဲ့ စစ်ရေးပူးပေါင်းလိုက်ပြီ ဟုလည်း ပြောသည်။
ယင်းသို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ဘုရားသုံးဆူမြို့ခံများ အထိတ်တလန့် ဖြစ်ပွားနေသည့်အပြင် အထုပ်အပိုးများ ပြင်ဆင်နေရ ကြသည်ဟု မြို့ခံတဦးက ပြောသည်။
သူက “အစိုးရတပ်နဲ့ ဒီကေဘီအေတပ်တွေ ပစ်ပြီ။ အခု မြို့ခံတွေကတော့ ကိုယ့်အထုပ်အပိုးတွေ သိမ်းဆည်းကြပြီ။”ဟု ပြော သည်။
Soldiers ordered not to fire into Burma
Published: 8/11/2010 at 03:04 PM
The army has ordered Thai soldiers not to fire back into the Burmese side after gunshots andarocket-propelled grenade landed on the Thai side in Mae Sot on Monday morning following clashes between Burmese rebel troops and the government soldiers.
Third Army commander Wannatip Wongwai confirmed that three gunshots and an RPG landed on Thai side as Karen rebels clashed with Burmese soldiers in Myawaddy in the morning.
Seven people -- three Thais and four Karens -- were injured from the incident, he said, adding that no Japanese journalist has been injured as reported by some local Thai media.
Lt-Gen Wannatip also said that about 300 Burmese people have fled across the border from Burma to the Thai side as of 10am Monday.
He said he has ordered the soldiers not to fire into the Burmese side, because the gunshots and an RPG landed in Mae Sot were unintentional.
There are currently no Thais in that area, as Thai shop owners near the border have already been evacuated, he said.
စံခလပူရီဘက် M 79 လေလုံးကျရောက်
ကြောင့်စံခလပူရီဘက်မှာ အမ် ၇၉လေလုံးကျရောက်ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုမရှိဟုဆိုသည်၊
တစ်လုံးက လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံအနာမှာ၊တစ်လုံးကအလံတိုင်အနာမှာနောက်နှစ်လုံးကရွားဘုန်းကြီးကျောင်းအနာမှဖြစ်သည် ဟု
M79 rounds land on border village
Published: 8/11/2010 at 04:19 PM
Four M79 grenades landed onavillage on the border with Burma in Sangkhlaburi district of Kanchanaburi province on Monday, but caused no casualties.
Jamras Kingnoi, the Sangkhlaburi district chief, said the M79 grenades strayed across the border from an ongoing fighting between Burmese government and Democratic Karen Buddhist Army (DKBA) troops in Burma.
The four M79 rounds landed on Phra Chedi Sam-ong village in tambon Nong Lu - one near the immigration office, one nearaflag post, and two nearashelter inside the village temple.
Nobody was hurt in the explosions.
Soldiers from the Surasee Force and border patrol police were despatched to the village after the incident.
ဒီညကျရင်တိုက်ပွဲပိုမိုရက်စက်မယ်၊ဗမာစစ်တပ်ဘက်ကနေမြဝတီတစ်မြို.လုံးမီးရှို.ပစ်ရန်ပြင်ဆင်နေပုံရနေ၊မြဝတီမြို.မရှိရင်လည်းဗမာပြည်ရှိတာဘဲ လို.နအဖစစ်သားတစ်ချို.အော်ဟစ်နေတယ်၊ဟုဒီကေဘီအေစစ်သားးပြောပြ၊ယုတ်မာသည့်ဗျူဟာဘဲ၊ကာကွယ်ဖို.ကပြည်တွင်းစစ်အစိုးရတပ်ရင်းကို မီးရှို.လိုက်ရုံဘဲ၊အချင်းချင်းဆဲဆိုနေကြသည့်အသံတွေကြားနေ၇တယ်၊တ်ုင်းရင်းသားတပ်တွေဘာဆက်မလဲ၊ပြည်သူတွေကိုနအဖစစ်တပ်ကဂရုစိုက် မည့်ပုံပပေါ်ဘူး၊မြဝတီမြို.မရှိရင်လည်းဗမာပြည်ရှိတာဘဲဆိုသည့်စကားလုံးကပြင်းထန်လွန်တယ်၊သေသေချာချာစဉ်းစားပြီးလုပ်သင့်တာကိုလုပ်ဖို. ဘဲရှိတယ်၊
ဗမာစစ်တပ်ဘက်ကနေအင်းအားပိုမိုဖြည့်လာနေသောကြောင့်တိုက်ပွဲကြာရှည်မယ်၊ဆိုင်တွေ၊ဈေးတွေအားလုံးပိတ်ထားသဖြင့်အစားအသောက်ပြတ် လပ်မှုဖြစ်ပွားနိုင်သည်၊ကေအန်ယူဘက်ကလည်းစစ်ကူးထပ်ပို.၇န်အသင့်အနေအထားမှာရှိနေသည်ဟုသိရှိရသည်၊ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ. လက်နှေးမနေသင့်ဘဲမိမိနယ်မြေဒေသတွင်ဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်ရန်ပန်းကြားအပ်ပါသည်၊ပြည်တွင်းရှိနိုင်ငံရေးအင်းအားစုများကလည်းပြည်သူချစ်တဲ့ စစ်တပ်အကူအညီဖြင့်အစိုးရဖွဲ.လိုက်ပါ၊ချီတက်လာသောဗျူဟာမှူးတွေကိုအရင်ရှင်းပစ်ရမယ်၊အင်းအားဖြတ်တောက်အောင်၇သည့်နည်းဖြင့်လုပ်ဆောင်ရမယ်။
မဲဆောက်ဘက်ကထားစိုင်လွတ် Tha Sai Lord မျက်နှာချင်းဆိုင်မြဝတီဘက်က နေရာအနှံ.မီးခိုတွေဖုံအုပ်နေ
တိုက်ပွဲကြောင့် ထွက်ပြေးသူ ၁၀၀၀၀ ကျော်နေပြီး ထိုင်းအမျိုးသမီးတစ်ဦးသေဆုံးပြီး အာပီဂျီ လက်နက်ဒဏ်ကြောင့် ၃ ယောက်ဒဏ်ရာရ၊ထွက်ပြေးသူများကိုလူသားစာနာရေးအစီစဉ်ဖြင့်စောင့်ရှောက်ရန်ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ညွန်.ကြား
Thai troops reinforced along Thai-Burma border
Thai army on Monday reinforced its troops along the border with Burma following fighting between Burmese troops and Karen ethnic minority in border town of Myawaddy.
Third Army Region Commander Lt Gen Wanthip Wongwai said thatarocket propelled grenade from the fighting had landed on Mae Sot district of Tak province.The blast on the Thai soil injured seven people; three Thais and four Karens.
He denied rumours that neither Thai noraJapanese reporter was killed from the spillover.
â€œI already ordered our troops not to retaliate the incident as they (the Burmese) do not intend to fire the explosives at us. But we would surely retaliate if they intended to fire at our side,â€� Wanthip said.
On Sunday, marking Burma's first general election in 20 years,asplinter faction of the Democratic Karen Buddhist Army (DKBA) seized the police station and post office in Myawaddy.
Government forces fought back Monday.
About 300 Burmese have fled the fighting into the Thai soil, the general said, adding the army would detain them until the situation goes back to normal.
Mae Sot district chief Kittisak Tomornsak said Thailand closed its border checkpoint in the town and evacuated people from along the river in the area.
The Thai side could not update the situation with the Burmese army across the border as the the fighting is still going on, the general said.
He added that the Karens tried to capture Myawaddy town of Burma to send signals to the Burmese government that they did not accept the general election held in Burma on Sunday.
The army has ordered closing of the border market in the district.
“ကျနော်တို့တိုက်နေပြီ။ ရွေးကောက်ပွဲကို လက်ခံဘူး။ ဘောဒါဂတ် မလုပ်နိင်ဘူး။ ပြည်သူလူထုတွေ ငတ်ကုန်တာကို လက်ပိုက်မကြည့်နိင်ဘူး။ ကျနော်တို့ စောဘဦးကြီးမူလေးချက် မရမချင်း ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်။ ကျနော်တို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ကျောင်းသားတွေနဲ့ အတူ လက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်။ တခြားအဖွဲ့ တွေလတည်း ကျနော်တို့ နဲ့ အတူတိုက်ပွဲဝင်ကြပါ လို့ ပြောချင်တယ်
ဒီကေဘီအေ ဘုရားသုံးဆူရှိ အစိုးရရုံးများကို ထိန်းထားပြီ
November 8th, 201
ဘုရားသုံးဆူမြို့ ရပ်ကွက် (၄) တွင် တိုးတက်သော ကရင်ဗုဒ္ဓဘာသာ တပ်မတော် (ဒီကေဘီအေ) နှင့် မြန်မာစစ်တပ်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက် ဆေးရုံ၊ အက်စ်ပီရုံးနှင့် သစ်တောရုံးကို ဒီကေဘီအေမှ ထိန်းထားသည်ဟု မြို့ခံများက ပြောသည်။
တိုက်ပွဲကြောင့် မြန်မာစစ်တပ်ဘက်မှ နှစ်ဦး ကျဆုံးပြီး တစ်ဦးဒဏ်ရာ ရရှိသွားသည်ဟု မြို့ခံတစ်ဦးက ပြောသည်။
တိုက်ပွဲမှာ မိနစ် (၂၀) ခန့် ကြာပြီး လက်နက်ကြီး အချက် (၂၀) ခန့်နှင့် လက်နက်ငယ် အချက်ပေါင်းများစွာ ပစ်ခတ်ကြသည်ဟုလည်း အခြားမြို့ခံတစ်ဦးက ပြောသည်။
၄င်းတိုက်ပွဲကြောင့် အက်စ်ပီရုံးနှင့် သစ်တောရုံးကြားရှိ ဓါတ်ဆီဆိုင်၊ ပြန်ကြားရေးရုံး နှင့် သစ်ထုတ်ရုံးများ မီးလောင်လျက် ရှိသည်။
တိုင်တစ်ရာကျောင်းတွင် ကျင်းပသည့် ကထိန်ပွဲမှ လူများလည်း လက်နက်ပစ်ခတ်သံကြောင့် ပြေးလွားနေကြသည် ဟု မြို့ခံတို့က ပြောသည်။
ဒေသခံ ပြည်သူများမှာလည်း မိမိရပ်ကွက်မှ အခြားရပ်ကွက်သို့ သွားခြင်းကို မြန်မာစစ်တပ်မှ တားမြစ်ခဲ့ပြီး လမ်းသွားသူများကိုလည်း ပစ်မိန့် ထုတ်ထားသဖြင့် မည်သူ့မှ လမ်းမထွက်ရဲကြကြောင်း မြို့ခံများက ပြောသည်။
မြို့ပြင်တွင် ကေအန်ယူတပ်များက မြို့တွင်းအခြေအနေကို စောင့်ကြည့်နေပြီး မြို့တွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာခြင်း မရှိသေးကြောင်း သိရသည်။
3 die in clashes in Burma
At least three civilians died inaclash between rebel troops and government soldiers inatown in eastern Burma on Monday,aday after rare elections, an official in the military-ruled country said.
Eleven more people were injured when heavy weapons fire from ethnic rebels hit the town of Myawaddy in Karen State, said the official, who did not want to be named.
မြ၀တီမြို့ခံများ မဲဆောက်ဘက် ပြောင်းရွှေ့
ဒီကေဘီအေနှင့်ဗမာစစ်တပ်တို.အကြားဖြစ်ပွားနေသည့်တိုက်ပွဲကြောင့်ပြည်သူလူထုများကိုစစ်အစိုးရတပ်ကပေါ်တာဆွဲလူတွေဖမ်းဆီးနေပြီးရှေ.တန်မှာအ သုံးချဖို.ဖြစ်တယ်လို.သိရှိရပါသည်၊ဒီညကျရင်ဗမာစစ်တပ်ကအကြီးအကျယ်တုံ.ပြန်ဖို.ရှိသည်ဟုဆိုသည်၊ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတပ်ကလည်းပြည်သူလူ ထုကိုစစ်အစိုးရတပ်တွေမတရားဖမ်းဆီးဖိနှိပ်နေတာကြောင့်ဝင်ရောက်တားဆီးဖို.ပြင်ဆင်နေသည်ဟုသိရှိရပါသည်၊လူထုတွေကိုကာကွယ်ဖြစ်သည်ဟုသိရှိ ရပါသည်၊စစ်အစိုးရတပ်ရက်စက်လာပါကနိုင်ငံအနှံ.တိုက်ပွဲဖြစ်မယ်ဟုသိရှိရပါသည်။
Posted by တိုင်းရင်းသားအသံ Tine Yin Thar Voice0comments
နှစ်ဖက်တပ်များမှာ ယမန်နေ့ညကတည်းက အင်အားများ ထပ်မံ တိုးချထားပြီး ယခု ပစ်ခတ်မှုမှာ မြ၀တီတံတားအောက်၊ မြို့တွင်းရှိ နအဖ ရှေ့တန်းရုံးနှင့် နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ နေရာယူထားသည့် ဓိဌာန်အောင်ကုန်းတွင်လည်း လက်နက်ကြီးများဖြင့် စတင် ပစ် ခတ်ခဲ့ပြီး လက်ရှိအချိန်တွင် အလုံးပေါင်း ၂၀ကျော်ရှိပြီဟု ဒီကေဘီအေနှင့် နီးစပ်သူ မြို့ခံတစ်ဦးက ပြောသည်။
“မနက်ကတည်းက တံတားအောက်ကနေ ဆက်တိုက်ဖြစ်လာလိုက်တာ အခုဆို အလုံး ၂၀ကျော်ပြီ။ အသံကတော့ 79 လက်နက် သံပဲ။ လက်နက်ငယ်တွေ သိပ်မကြားရဘူး။ ရှေ့တန်းရုံးနားမှ ဖြစ်တဲ့ပစ်ခတ်မှုမှာ ဆိုက်ကားသမား အပါအ၀င် လူ ၃ယောက် ပွဲချင်း ပြီးသေတယ်။ ဒဏ်ရာနဲ့ ဆေးရုံရောက်သွားတာက အယောက် ၂၀လို့ သူနာပြုဆရာမက ပြောတယ်လေ။”ဟု ဆိုသည်။
မြ၀တီ-မဲဆောက် တံတား၏ မြန်မာဘက်ခြမ်းတွင် ဒီကေဘီအေနှင့် နအဖတို့ အပြန်အလှန် ပစ်ခတ်မှုကြောင့် နအဖဘက်မှပစ် သည့် 81 အမျိုးအစားလက်နက်ကြီးတလုံးနှင့် 79 ကျည် ၃လုံး ထိုင်းဘက်ခြမ်းသို့ ကျရောက်ခဲ့မှု ကြောင့် ထိုင်းအရပ်သား ၁၉ ဒဏ် ရာရှိခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ဒီကေဘီအေ တပ်များသည် တံတားဘက်ကို ကျောပေး၍ မြ၀တီမြို့တွင်းဘက်တွင် ရှိသည့် နအဖ စစ်တပ်များနှင့် အပြန်အလှန် ပစ်ခတ်ခဲ့ရာ နအဖတပ်များက ပစ်ခတ်သည့်လက်နက်များ ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ခြမ်းသို့ ကျရောက်ကာ ထိုင်းအရပ်သားများ ယခုလို ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
တချိန်တည်းတွင်ပင် ဒီကေဘီအေ တပ်မဟာ(၅) အခြေစိုက်ရာ ဝေါ်လေဒေသတွင်လည်း ဒီကေဘီအေနှင့် နအဖ တပ်များ တိုက်ပွဲ တပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဒီကေဘီအေဘက်မှ နအဖ အရာရှိတစ်ဦးနှင့် တပ်သားတစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းနှင့် ကော့ကရိတ်မြို့ဘက်တွင် လည်း ဒီကေဘီအေတပ်များက နအဖ အရာရှိတစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးထားကြောင်း သိရသည်။
ဒီကေဘီအေ တပ်မဟာ (၅)မှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်စောလားပွယ်(ဗိုလ်နှုတ်ခမ်းမွေး)က ၎င်းတို့တပ်များက ယနေ့မနက် ၁၁နာရီကျော်တွင် နအဖ စစ်သား ၈ဦးကို ဖမ်းဆီးမိခဲ့ပြီး ဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိသူ နအဖအရာရှိတစ်ဦးလည်း ပါဝင်သည်ဟု ကေအိုင်စီကို ပြောသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် ဒီကေဘီအေတပ်များ မြ၀တီတစ်မြို့လုံးကို ဖြန့်ကျက်သိမ်းဆည်းထားသည့် အခြေအနေတွင် ရှိနေပြီး မြ၀တီ လူထုမှာ အတော်ကြောက်လန့်နေကြကြောင်းနှင့် ထိုင်းဘက်ခြမ်း ချစ်ကြည်ရေးတံတားအောက်၌လည်း သတင်းထောက်များနှင့်အ တူ တံတားထိပ်မှစ၍ မဲဆောက်မြို့အ၀င် ကားလမ်းကြီးအတိုင်း လုံခြုံရေးတပ်များ လက်နက်အပြည့်အစုံနှင့်အတူ အင်အား ထပ်မံ ဖြည့်ဆည်းထားသည်။
ယနေ့ နေ့ခင်းအထိ နောက်ဆုံးရရှိသည့်သတင်းအရ ထိုင်းနယ်ခြားစောင့်တပ်များကလည်း ၎င်းတို့နယ်သို့ ပစ်ခတ်မှု ထပ်မံ ကျော် လွန်လာပါက ပြန်လည်ပစ်ခတ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။